nanoloana ny fihetsiky ny mpanolotsain’ny minisitry ny filaminana anatiny iray. Andro efa tamin’ny 5 ora sasany hariva no mbola milahatra haka ny pasipaoron’izy ireo na an’ny fianakaviany izay mila izany maika ireto olona ireto no nandalo izy ary nanazava fa efa tsy misy tompon’andraikitra intsony ao fa inona ny olana ? Rehefa nitaraina sy nanazava ireto farany fa efa nisy hatramin’ny 3 ora no nilahatra teo, ny sasany avy lavitra toy ireo avy any Mahajanga sy Antsiranana. Ny sasany efa raiamandreny be. Ny sasany taraiky fidirana amin’ny fanohizana fianarana any andafy ny zanany raha tsy azo tamin’io fotoana io ny pasipaoro. Rehefa nahita izany dia nanapa-kevitra ity tompon’andraikitra ity, ary izy tenany mihitsy no namoaka ireo pasipaoro sy nanamarina ary nanome izany ireo tompony, tsy naka tambiny, hoy ny raim-pianakaviana iray naneho ny hafaliany. Nilaza mihitsy izy fa tsy tantiny ny mahita toe-javatra toy ireny nefa samy Malagasy. Maha te hidera ilay fihetsika ary mendrika ny tazomina amin’ny toerany sy tadiavina hameno orinasam-panjakana ny karazan’olona toy itony, hoy hatrany ny fanehoan-kevitra.